Shirkii jaraa'id ee booliska - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkii jaraa'id ee boolisku qabteen.Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod
Polisen i Rinkeby
Shirkii jaraa'id ee booliska
Publicerat måndag 27 juli 2009 kl 17.35
Waxaa jiray warar sheegayey in hooyada iyo carruurtaas ku geeriyootay musiibadii dabka dhacay ay ku dhex dhinteen wiishka ama elemernter-ka, hase ahaatee taasi waxaa beeniyey booliska oo sheegay iney ku dhinteen jarantarta oo ay marba dhinac hooyadu ilamaheeda ula carareysay. Farsamayqaanada xagga tiknikada dabdemiska u qaabilsan waxaa ay sheegeen iney aheyd shil dab oo dhacay, baaritaana ay ku hayaan sida ay wax u dhaceen. " Haatan ma jirto cid shaki looga qabo in dabkani ay ka dambeysay, waana arrin ku deg degis ah" ayey tiri Karin Solberg oo ah masuul xagga warbixinada madax uga ah booliska degmada Rinkeby.
Ibraahim Buraale oo ah afhayeenka musiibadan dabka dhacay ee dhinaca soomaalida, waxa uu sheegay in aabaha iyo ilmihiisa kale ee ka ka badbaaday dabkaasi dareemayaan inaan dowladu gacan qaban habeenkii dhibku soo gaaray.
"Haddii ay joogi lahaayeen gurigooda dhexdiisa waxaa ay ka bad baadi lahaayeen dabkaasi" ayuu yiri Chirester Ängehov oo ah ku xigeenka madaxa dab demiska oo maalinimadii axada ka hadlayey shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen booliska, dab demiska iyo afhayeenka dhinaca qoyska soomaaliyeed ee musiibada gaartay u qaabilsan Ibraahim Buraale misna ah gudoomiyaha Isbaheysiga Muslimiinta ee Järva.